अर्थ - Sitalpati News
आजदेखि नयाँ आर्थिक बर्ष २०७६/७७ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक बर्षसंगै अब तलब लिन सरकारले प्यान कार्ड अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था बमोजिम अब कुनै प्राईभेट कम्पनी, संस्था, फर्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना कुनैपनि व्यक्तिलाई तलब दिन पाउने छैन । नयाँ आर्थिक बर्ष...
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाडौँ । विदेश जाने र विदेशबाट फर्कने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने सामानको नयाँ सूची सार्वजनिक भएको छ। सरकारले जेठ २५, २०७३ को सूची विस्थापित गर्दै नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले नयाँ बजेटबाट नेपाली नागरिक विदेश जाँदा सौगातका रुपमा नेपालमा उत्पादन भएका ५० ह...
दुई साता नबित्दै भारतीयबाट आउने तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच रोकियो
शीतलपाटीन्युज डटकम। सरकारले असार पहिलो सातादेखि भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच गर्यो । त्यसको दुई साता नबित्दै जाँच रोकियो । कर्मचारी अभावका कारण जाँच रोक्नुपरेको सङ्घीय सरकारले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले भनेको छ, “आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरेर एक वर्षभित्रै जाँच प...
शीतलपाटीन्युज डटकम। विगत वर्षमा जस्तै यस वर्षपनि सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै खर्चिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य भेट्न सेकन । त्यसमा १२ प्रतिशतले राजस्व संकलनले कम भयो । मंगलबार साँझसम्म बजेटको कुल खर्च १० खर्ब ८२ अर्ब ८५ करो...
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाडौं-विभिन्न बाध्यता तथा रोजगारीका क्रममा विदेशमा पुगेर सङ्घर्ष गरेका नेपालीले स्वदेश फर्केर सफल व्यवसायी बनेर रोजगार सिर्जना गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा आर्जन गरेको पूँजी र अनुभवलाई स्वदेशमा उपयोग गरी मुलुकको विकास र समृद्धिमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले उनीहरु केही वर्...
बुधबारदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने
शीतलपाटीन्युज डटकम। बुधबारदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लाग्ने भएको छ । संघीय संसद्बाट पारित आर्थिक विद्येयकमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत संकलन गर्ने व्यवस्था गरेसँगै उपभोक्तामाथि शुल्को भार बढ्ने भएको छ । य...
सन् २०१८ मा पर्यटनबाट ६९ अर्ब आम्दानी
शीतलपाटीन्युज डटकम। मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिने पर्यटन क्षेत्रबाट सन् २०१८ मा रु ६९ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख आम्दानी भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल टुरिज्म स्टाटिसटिक्स–२०१८’ अनुसार यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ प्रतिश...
फेसबुक डिजिटल करेन्सी प्रति अमेरिकी राष्ट्रयपति ट्रमपको यस्तो प्रतिक्रिया
शीतलपाटीन्युज डटकम। अमेरिकी राष्ट्रयपति डोनाल्ड ट्रमले क्रिप्टोकरेन्सी आफूलाई बिश्वास नरहेको बताएका छन् । उनले क्रिप्टोकसेरी मुद्रा हाइन भन्दै यस मुद्राको ब्यापार गर्न चाहाने हरु बैकिङ्ग् नियमनको दायरामा आउनुपर्छ भने । विघृतिय प्रकृतिको भएकाले लगभग पत्ता लगाउन नसकिने यस्ता क्रिप्टोकसेर...
भारतमा पीडित नेपाली मजदुर को अवस्था के छ ? नेपाल सरकारलाई कुनै मतलब छैन !
शीतलपाटीन्युज डटकम। भारतमा कति नेपाली कस्तो अवस्थामा छन्, उनीहरुको सुरक्षा स्थिति के छ, नेपाल सरकारलाई कुनै मतलब छैन । लाग्छ, यो विषय नेपाल सरकारको दायित्वभित्रै पर्दैन । सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि दिपायलमा काम गर्दै आएको संस्था निड्स नेपालका अनुसार भारतमा कार्यरत नेपाली कामदार...
शीतलपाटीन्युज डटकम। विराटनगर तरकारी र फलफूल बोकेका भारतीय ट्रक विषादी परीक्षण नगरी नेपाल भित्रन थालेका छन् । प्रदेश १ का तीन नाका (झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर र सुनसरीको भन्टाबारी) बाट सयौंको संख्यामा तरकारी र फलफूल बोकेका ट्रक नेपाल छिरेका हुन् । काँकडभिट्टा नाकाबाट मंगलबा...
हाँसोलाई पेसा बनाउनेहरुका लागी 'कमेडी च्याम्पिएन'को घोषणा
शीतलपाटीन्युज डटकम पछिल्लो समय नेपालमा रियालिटी शो हरु बढिरहेका छन् । बिशेषगरी गायक रियालिटी शो हरु एकपछि अर्को गर्दै थपिएको बेला हाँस्य बिधालाई केन्द्रित गर्दै स्ट्यान्डप कमेडी (हास्य प्रधान) कार्यक्रम ‘कमेडी च्याम्पिएन’ पनि हुने भएको छ । हँसाउने बिधालाई पेसा बनाउन चाहानेहरुका लागी अ...
अस्ट्रेलियामा कामदारको तलब बढ्यो, अब प्रतिघण्टा यति पाइने..
शीतलपाटीन्युज डटकम। अस्ट्रेलियाको सरकारले कामदारहरुलाई दिने न्यूनतम तलबमा वृद्धि गरेको छ । वृद्धि भएको तलबअनुसार अबदेखि अस्ट्रेलियामा फुल टाइम (साताको ३८ घण्टा) काम गर्ने जोकोहीले ७ सय ४०.८० (करीब ६० हजार रुपैयाँं पाउने भएका छन्) । जुन गतवर्षको भन्दा ३ प्रतिशतले बढी हो । आजको कान्तिपुर दैनिक ल...
आइफा अवार्ड विवादः नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटन बोर्ड भन्छ, पैसा दिने निर्णय भएको छैन
शीतलपाटीन्युज डटकम। इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड वितरण कार्यक्रम काठमाडौँमा गर्न नेपालले पैसा दिने भन्ने समाचारप्रति आफ्नो ध्यानार्कषण भएको जनाउँदै नेपाल पर्यटन बोर्डले अहिलेसम्म पैसा दिने सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ । तर यस्ता कार्यक्रम गर्दा आर्थिक सहयोग नगरी पनि नहुने आश...
शीतलपाटीन्युज डटकम। चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँको भानु नगरपालिकामा शुक्रबार राति एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भानु नगरपालिका–२ भकुण्डोथोक बस्ने ९ वर्षीया पुष्पा अधिकारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । आफ्नै घरको आँगनमा खेलिरहेको अवस्थामा चितुवाको आक्रमणबाट बालिक...
शीतलपाटीन्युज डटकम। नेपाली काङ्ग्रेसले गत वैशाख २५ गतेदेखि शुरु गरेको ‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेश नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’को पहिलो चरण आज समापन भएको छ । पहिलो चरणको एक महीने जागरण अभियानका क्रममा काङ्ग्रेसले ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर टोलस्तरसम्म...
काठमाडौं जिल्ला प्रहरी सार्न १ अर्ब २० लाख निकासा
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाडौं । काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुलाई रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गामा सार्न रकम निकासा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा गर्ने निर्णय भएको हो । सञ्चार...
सिटी एक्सप्रेसमा आएको पैसा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिन सकिने
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच रेमिटेन्स सेवा सुरु भएको छ । सम्झौता पश्चात् सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबाट आउने सम्पूर्ण विदेशी तथा स्वदेशी रेमिटान्स, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सम्पूर्ण शाखाबाट सहज रुपले ग्राहकहरुले प्राप्त गर्न सक्नेछन । स...
शीतलपाटीन्युज डटकम। सोलुखुम्बु– उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वच्छ वातावारण र दीर्घ जीवन चाहने संसारभरका मानिसलाई सगरमाथा हिमाल सफाइ अभियानमा जोडिन आह्वान गरेका छन् । सगरमाथा हिमाल सफाइ अभियान–२०७६ का अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘वातावरण...
शीतलपाटीन्युज डटकम। साइपाल गाउँपालिकाको फराली खेतमा यार्सागुम्बा टिप्न पाउनुपर्ने माग राख्दै तलकोट गाउँपालिकाका बासिन्दाले बुधबार त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएका छन् । साइपाल–३ का बासिन्दाले सामुदायिक वनका नाममा सो ठाउँमा यार्सागुम्बा टिप्न नदिने भएपछि तलकोट–४ का बासिन्दाले...
शीलपाटीन्युज डटकम। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण पौडेलले लेखेका छन् । विमानस्थलको तीन किलोमिटर रनवे निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले जानकारी...